ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များအဖွဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့က နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံစဉ်
ဓါတ်ပုံ - ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များအဖွဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်
စိတ်မသန်စွမ်းသူတွေကြောင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးတာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များအဖွဲ့နဲ့ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မြစ်ကြီးနားကနေ နေပြည်တော်ကို ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွေနဲ့ ချီတက်လာတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များအဖွဲ့ဝင် ၅၀ ကျော်နဲ့ ဒီနေ့ နေပြည်တော်က NRPC ရုံးမှာ တွေ့ဆုံစဉ်ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းလွင် က ပြောပါတယ်။
"တကယ်တော့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရသေးတာဟာ စိတ်မသန်စွမ်းတဲ့သူတွေကြောင့်လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသော်လည်းပဲ စိတ်တွေသန်စွမ်းပြီးတော့ ဒီအလုပ်ကိုလုပ် ကြတယ်ဆိုတာ သူကပြောတာပါ။ ပြည်သူလူထုက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာကို နှုတ်က ဖွင့်ပြီးတော့ပြောရမယ်။ မပြောဘဲမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောတာ။ လူထုပါဝင်ဖို့ လိုတယ်ဆို တဲ့အကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စဟာ လူထုအားလုံးပါဝင်မယ်ဆိုရင် အမြန်ဆုံးရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောတယ်။"
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အခုလိုဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်တာကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆို တာ ဆွေးနွေးနေကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူအားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းလည်း ဦးသိန်းလွင်က ပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးတွဲလက်များအဖွဲ့ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့မှာ ဒုတိယအကြိမ် ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ ကျင်းပ မယ်လို့ မူလသတင်းထုတ်ပြန်ထားချက်အရ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ ကနေ နေပြည်တော်ကို ဘီးတပ်ကုလားထိုင်တွေနဲ့ ချီတက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညီလာခံကို မတ်လလယ်ပိုင်းမှာ ကျင်းပမယ်လို့ ရက်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်တာကြောင့် ညီလာခံမတိုင်ခင် လှုပ်ရှားမှု အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသီချင်းတွေ သီဆိုပြီး ပြည်သူတွေဆီက လက်မှတ်ကောက်ခံတာကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေနဲ့ လက်မှတ်တွေ ကောက်ယူထား တာ တစ်သောင်းသုံးထောင်ကျော်ရရှိနေပြီလို့ ပြောပါတယ်။
That is very true. Well done! congratulations to you all for your effort for peace union!!
Feb 28, 2017 10:17 AM